"Hoy ianao: Manankarena sy efa nihary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory; kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka."Apokalypsy 3:17
"(Hoy Jesosy:) Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro."Jaona 7:37
Mahitsy fiaina ity kristiana iray, manatrika tsy tapaka ireo fotoam-pivavahana, manao soa, ary afaka hirehareha amin’ny fahalalany Baiboly.
- Heverinao ve fa ho ampy ireo toetra tsara ireo, hisehoany eo anatrehan’Ilay Andriamanitra masina?
- Tsy misy olona lavorary, ary izy ve tsy tsara kokoa noho ity mpiara-miasa aminy ity na iry mpiara-monina iry? Raha mba miaina tahaka azy avokoa ny olona, dia handeha tsara ny zava-drehetra.
- Faly amin’ny tenany ity lehilahy ity, ka hahita fitia eo imason’Andriamanitra ve? Diso hevitra izy. Izy no ilazan’ny Tompo Jesosy, “Ilay Vavolombelona mahatoky”, hoe: “Ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka”. Ny hambontsika, ny ezaka atao, ny asa ara-pivavahana ary ny fahalalana ara-tsaina ny Baiboly, dia tsy ampy hiatrehana an’Andriamanitra. Ny fahotana rehetra, na hamaivanin’ny fiarahamonina aza, dia manakana antsika tsy hahita an’Andriamanitra. Tsy maintsy miaiky izany isika tsirairay, na dia sarotra ekena aza izany. Aleo isika tsy mitoetra ho jamba sy faly amin’ny tenantsika, fa kosa miaiky hoe tsy manana na inona na inona tokoa hatolotra an’Andriamanitra. Izany toe-po izany ihany no ahazoantsika mandray ny fahasoavany.
Jesosy Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia maty teo amin’ny hazofijaliana mba hanome antsika ny famelan-keloka maimaimpoana. Ny fiarovana ny mpino tsirairay dia miorina amin’ny sanda nefain’i Kristy, Izay mameno azy amin’ny harenan’ny fahasoavany tsy hita lany.